Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/18 Martsa 2014 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/18 Martsa 2014
Mbola (nitranga in-2) : Mbola any amin'ny fitsarana io raharaha io amin'izao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
krizy (nitranga in-1) : Ny marina, mora mirona kokoa amin'ny fideraderana ny ny filoha ny olona malaza tahaka an'i Khabensky rehefa amin'ny fotoanan'ny krizy iraisampirenena. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hosoka (nitranga in-1) : Tokony hamelomana kiririokam-panairana izany: hosoka angamba io pejy io. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Ankilan' (nitranga in-1) : Ankilan'izany, indroa nifanena (nifanondraka) tamin'ny vorona fotsisofina aho tany. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
horaràna (nitranga in-1) : Tokony horaràna ihany koa ny vaninteny 2 voalohany amin'ny Aladdin. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
boky (nitranga in-2) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
Voasivan'ny Ministeran'ny atitany ny trano famoaham-boky Bahasa namoaka ny boky mirakitra ny tantara an-tsary ‘Ultraman' noho ny nampiasany ny teny hoe ‘Allah'. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
four (nitranga in-1) : So, I got three lifers in four hours birding in Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
andro (nitranga in-3) : Afa-nandre ny hiakam-borondolo-voromahery Mindanao sy vorondolo kelikely Everett aho raha nanao fitsangatsanganana nizaha vorondolo tao amin'ny faritra ihany andro vitsivitsy talohan'izao. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fahitana (nitranga in-2) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
Smog, dengue, water shortage, dry spell, Ultraman, now MH370. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mamaky (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manam-pahefana izay nandrara fa mety hampikorontana ny ankizy izany rehefa mamaky ny Allah izy ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
adnan (nitranga in-1) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
Krimea (nitranga in-2) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
momba (nitranga in-5) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
ankamamian' (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
Satria aho mpanohana ny fiarovana ny maoralim-bahoaka, dia te-hanolotra soso-kevitra fanampiny ho azy ireo aho momba ireo zavatra hafa ankamamian'ny fahazazana azon'izy ireo raràna mba hanamarinana ny isany sy ny karamany. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
negativity (nitranga in-1) : Why all these negativity haunting us. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
discovering (nitranga in-1) : We will definitely be back and spend more time discovering more of the forest. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
akory (nitranga in-1) : com/34cu9dhjxE
— Aida Anuar (@aidaadibah) March 6, 2014 Ny hany anton'ny fandraran'ny KDN ny Ultraman; Ny fitondrany akanjo manara-bàtana sy ny tsy fitoviany amin'ny Superman akory ao anaty akanjo manara-bàtana. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
namany (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hevitra (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Izany (nitranga in-2) : Izany hoe, nahapika “zavamananaina” telo aho nandritra ny ora efatra nizahako vorona tao Pasonanca. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fotana (nitranga in-1) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
voromanidina (nitranga in-4) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
atitany (nitranga in-1) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
fotsisofina (nitranga in-1) : Ankilan'izany, indroa nifanena (nifanondraka) tamin'ny vorona fotsisofina aho tany. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
facebook (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
fahazazana (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
sosialy (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Matahotra (nitranga in-1) : Matahotra ny (na angamba tsy afaka) hiasa mafy sy hieritreritra amim-pahakingan-tsaina mba hanome malaky/ hanitsy resaka/ olana. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
betsaka (nitranga in-3) : Firenena betsaka Silamo i Malezia. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
raharaha (nitranga in-1) : Mbola any amin'ny fitsarana io raharaha io amin'izao. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
miisa (nitranga in-1) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
joined (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
vaovao (nitranga in-2) : Amin'ny ankapobeny ny fomba tsotra indrindra hatrany dia ny mamono/mandrara/manova na mamorona lalàna sy fitsipika vaovao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
anay (nitranga in-1) : Not Smart: Vahaolana tsotsotra foana no ataon'ny mpitondra anay. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
these (nitranga in-1) : Why all these negativity haunting us. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
zavaboary (nitranga in-1) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mampitohy (nitranga in-1) : Fanampin'izany, mety ahitana vorona mpifindramonina ihany koa amin'ireo vondro-nosy izay andalovan'ny lalam-pisidinana mampitohy an'i Azia sy Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
guiding (nitranga in-1) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
I also got a lifer while guiding. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
omany (nitranga in-1) : Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fitsarana (nitranga in-1) : Mbola any amin'ny fitsarana io raharaha io amin'izao. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mpampianatra (nitranga in-1) : Mandritra izany fotoana izany ny mpampianatra amin'ny oniversite, ny profesora Arnold Alamon namoaka sarin'ny vorona ao Gitagum, ao amin'ny nosy Mindanao ihany koa. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Kevin (nitranga in-3) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
Smog, dengue, water shortage, dry spell, Ultraman, now MH370. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Saingy (nitranga in-2) : Saingy mampalahelo, ahiana ho potiky ny tetikasam-pampandrosoana mihetaketaka sy ny fahapotehan'ny tontolo voajanahary ny fonenam-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
toerana (nitranga in-2) : Tena mahavariana tokoa ny toerana sy ny fiainam-borona ao (ary mora ihany koa ny lalana. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
occurrence (nitranga in-1) : The occurrence of breeding Great Egrets there is a great subject for further study. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nandritra (nitranga in-1) : Izany hoe, nahapika “zavamananaina” telo aho nandritra ny ora efatra nizahako vorona tao Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
trails (nitranga in-1) : The place and bird life is amazing (and the trails are easy. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Novaya (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mahavariana (nitranga in-1) : Tena mahavariana tokoa ny toerana sy ny fiainam-borona ao (ary mora ihany koa ny lalana. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
further (nitranga in-1) : The occurrence of breeding Great Egrets there is a great subject for further study. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nampiasaina (nitranga in-1) : Ny lazan'i Khabensky sy ny teny mahitsy nampiasaina hanamelohany an'i Kremlin, anefa, no mametraka ny fanambarana nataony ho zavatra manokana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
nosivanina (nitranga in-1) : Ireto misy tora-po vitsivitsy avy amin'ireo tranonkalam-baovao “Malaysiakini”:
Relevancy: Maninona no nosivanina ilay boky rehefa azo atao ihany ny mangataka ny fanovana ny teny. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mihoatra (nitranga in-2) : Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Daryl (nitranga in-1) : — Daryl Tan (@ExDaro) March 7, 2014
Tratra aoriana ny fandraràna ny #ultraman, noheveriko fa hanihany. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
hanome (nitranga in-1) : Matahotra ny (na angamba tsy afaka) hiasa mafy sy hieritreritra amim-pahakingan-tsaina mba hanome malaky/ hanitsy resaka/ olana. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Maherifo (nitranga in-1) : Maherifo ao aminà tantara an-tsary malaza Japoney i Ultraman. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mpitondra (nitranga in-2) : Tsipihin'izay ireo fa tokony ho nangataka tamin'ny mpamoaka ilay tantara fotsiny ny mpitondra mba hanova ilay dikanteny. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
amintsika (nitranga in-1) : Fa nahoana no mitranga amintsika iree zava-dratsy rehetra ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Pasonanca (nitranga in-4) : So, I got three lifers in four hours birding in Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
famoahana (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
manidina (nitranga in-1) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
rehetra (nitranga in-1) : Fa nahoana no mitranga amintsika iree zava-dratsy rehetra ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
bird (nitranga in-2) : But I did get a good look at the whole bird as it glided out of sight. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
tontolo (nitranga in-2) : Saingy mampalahelo, ahiana ho potiky ny tetikasam-pampandrosoana mihetaketaka sy ny fahapotehan'ny tontolo voajanahary ny fonenam-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
oniversite (nitranga in-1) : Mandritra izany fotoana izany ny mpampianatra amin'ny oniversite, ny profesora Arnold Alamon namoaka sarin'ny vorona ao Gitagum, ao amin'ny nosy Mindanao ihany koa. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
alina (nitranga in-1) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tany (nitranga in-2) : Ankilan'izany, indroa nifanena (nifanondraka) tamin'ny vorona fotsisofina aho tany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
potiky (nitranga in-1) : Saingy mampalahelo, ahiana ho potiky ny tetikasam-pampandrosoana mihetaketaka sy ny fahapotehan'ny tontolo voajanahary ny fonenam-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nahoana (nitranga in-2) : Fa nahoana no mitranga amintsika iree zava-dratsy rehetra ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Diniho (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hours (nitranga in-1) : So, I got three lifers in four hours birding in Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
iray (nitranga in-4) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mirona (nitranga in-1) : Ny marina, mora mirona kokoa amin'ny fideraderana ny ny filoha ny olona malaza tahaka an'i Khabensky rehefa amin'ny fotoanan'ny krizy iraisampirenena. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hisivanana (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
Iray (nitranga in-1) : Iray amin'ireo mpiantsehatra malaza ao Rosia i Konstantin Khabensky. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mampiseho (nitranga in-1) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
anarana (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
Fanamarihan'ny mpandika teny amin'ny teny malagasy, mety hisy fahadisoana ny anaram-borona amin'ny teny malagasy ka irariana indrindra ny hanitsianareo eo amin'ny fanehoan-kevitra izay voromanidina fantatrareo anarana amin'ireo sary ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
great (nitranga in-1) : The occurrence of breeding Great Egrets there is a great subject for further study. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mirakitra (nitranga in-1) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
study (nitranga in-1) : The occurrence of breeding Great Egrets there is a great subject for further study. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Nadika (nitranga in-1) : Nadika hoe Allah ny teny hoe Andriamanitra ao amin'io tantara io. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
tompon' (nitranga in-1) : )
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy voamarina ny pejy Vkontakte an'i Khabensky, saingy tian'ilay tompon'ny kaonty hieritreritra ho izany ny mpamaky. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
miahiahy (nitranga in-1) : )
Fa misy ihany ny antony matanjaka ahafahana miahiahy fa tsy i Khabensky no nanoratra ilay lahatsoratra pro-Ukraine, anti-Putin ao amin'ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
itovizany (nitranga in-1) : Ary koa ny heroines dia litera 2 tsy itovizany amin'ny heroin, zava-mahadomelina voarara any Malezia. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
seranampiaramanidina (nitranga in-1) : Ny tanànan'i Gitagum dia manakaiky an'i Laguindingan, toerana misy ny seranampiaramanidina iraisampirenena. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
feno (nitranga in-1) : Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Fitatra (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
Fitatra. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
bitika (nitranga in-1) : Nanana anjara bitika ihany koa izy tany amin'ny sarimihetsika tandrefana tahaka ny “Tinker Tailor Solider Spy” sy “Wanted”. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mijery (nitranga in-1) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fametrahana (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Tena (nitranga in-2) : Tena mahafinaritra tokoa ny Valan-Javaboary Pasonanca raha hizahana voromanidina. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
iraisampirenena (nitranga in-3) : Ny tanànan'i Gitagum dia manakaiky an'i Laguindingan, toerana misy ny seranampiaramanidina iraisampirenena. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
marina (nitranga in-1) : Ny marina, mora mirona kokoa amin'ny fideraderana ny ny filoha ny olona malaza tahaka an'i Khabensky rehefa amin'ny fotoanan'ny krizy iraisampirenena. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mampalahelo (nitranga in-1) : Saingy mampalahelo, ahiana ho potiky ny tetikasam-pampandrosoana mihetaketaka sy ny fahapotehan'ny tontolo voajanahary ny fonenam-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mitana (nitranga in-1) : (Amin'izao fotoana anoratana izao dia mbola mitana ny sangany hatrany ilay lahatsoratra. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
saingy (nitranga in-3) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
manaraka (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
lahatsary (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fanadihadiana (nitranga in-1) : Lohahevitra lehibe ho amin'ny fanadihadiana lalina kokoa ny fahitana ankanim-boropotsy lehibe eto. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Solider (nitranga in-1) : Nanana anjara bitika ihany koa izy tany amin'ny sarimihetsika tandrefana tahaka ny “Tinker Tailor Solider Spy” sy “Wanted”. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mora (nitranga in-2) : Tena mahavariana tokoa ny toerana sy ny fiainam-borona ao (ary mora ihany koa ny lalana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
vaninteny (nitranga in-1) : Tokony horaràna ihany koa ny vaninteny 2 voalohany amin'ny Aladdin. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
telo (nitranga in-1) : Izany hoe, nahapika “zavamananaina” telo aho nandritra ny ora efatra nizahako vorona tao Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
more (nitranga in-2) : We will definitely be back and spend more time discovering more of the forest. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Soimanga (nitranga in-1) : Indreto ny sasantsasany amin'ny sarim-borona ao amin'ny pejy Facebook an'i Arnold:
Soimanga volon'oliva. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
hakanton' (nitranga in-1) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Maninona (nitranga in-1) : Ireto misy tora-po vitsivitsy avy amin'ireo tranonkalam-baovao “Malaysiakini”:
tanànan' (nitranga in-1) : Ny tanànan'i Gitagum dia manakaiky an'i Laguindingan, toerana misy ny seranampiaramanidina iraisampirenena. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Facebook (nitranga in-1) : Indreto ny sasantsasany amin'ny sarim-borona ao amin'ny pejy Facebook an'i Arnold:
dondrona (nitranga in-1) : — Ariff Iman Anuwi (@AriffImn) March 7, 2014
Fa nahoana ny olona no dondrona e. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
7000 (nitranga in-1) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Ultra (nitranga in-1) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
karamany (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
mahazatra (nitranga in-1) : Any amin'ny firenena maro, zavatra iainana andavanandro mahazatra ny mahare fanambarana politika ataon'ny mpiantsehatra mitsikera ny filoha eo amin'ny fahefana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
trano (nitranga in-1) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
Mitebiteby (nitranga in-1) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
Smog, dengue, water shortage, dry spell, Ultraman, now MH370. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
volon' (nitranga in-1) : Indreto ny sasantsasany amin'ny sarim-borona ao amin'ny pejy Facebook an'i Arnold:
Namaly (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Photo (nitranga in-1) : Photo by Arnold Alamon
Tsikirovana Mavo (Bulbul). (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fantatrareo (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
Silamo (nitranga in-1) : Firenena betsaka Silamo i Malezia. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
atsimon' (nitranga in-1) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Power' (nitranga in-1) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
fanampiny (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
fifandraisana (nitranga in-1) : Jasmine: Mamporisika amin'ny fifandraisana amin'ny mpangalatra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mipoitra (nitranga in-1) : Any Rosia, tena ankavitsiana dia ankavitsiana izany olona mipoitra matetika amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika izany ka hitsikera, na mahasahy irery hiampanga an'i Vladimir Putin. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mitranga (nitranga in-1) : Fa nahoana no mitranga amintsika iree zava-dratsy rehetra ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
politika (nitranga in-1) : Any amin'ny firenena maro, zavatra iainana andavanandro mahazatra ny mahare fanambarana politika ataon'ny mpiantsehatra mitsikera ny filoha eo amin'ny fahefana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
rosiana (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Putin (nitranga in-3) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mitsikera (nitranga in-1) : Any amin'ny firenena maro, zavatra iainana andavanandro mahazatra ny mahare fanambarana politika ataon'ny mpiantsehatra mitsikera ny filoha eo amin'ny fahefana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
manamarika (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Rosia (nitranga in-2) : Iray amin'ireo mpiantsehatra malaza ao Rosia i Konstantin Khabensky. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tsotra (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny ny fomba tsotra indrindra hatrany dia ny mamono/mandrara/manova na mamorona lalàna sy fitsipika vaovao. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
amazing (nitranga in-1) : The place and bird life is amazing (and the trails are easy. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Jery (nitranga in-1) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
forest (nitranga in-1) : We will definitely be back and spend more time discovering more of the forest. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nanoratra (nitranga in-1) : )
mpanohana (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
Intake (nitranga in-1) : Saripikan'i Angela Colmenares-Sabino
Angela, iray amin'ireo delegasionan'ny fetiben'ny vorona, nizara video (lahatsary) Facebook-n'ny voromaherim-bibilava hitany tao amin'ny dobo Intake ao Zamboanga. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fiainan' (nitranga in-1) : Navitrika tamin'ny fisoloambava ho fiarovana ny tontolo masin'ny vorona ankoatra ny fanentanana fanairana momba ny fiainan'ny vorona mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa ny “Birders” (mpankafy vorona). (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
atao (nitranga in-1) : Ireto misy tora-po vitsivitsy avy amin'ireo tranonkalam-baovao “Malaysiakini”:
earlier (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fanekena (nitranga in-1) : Mulan: Mamporisika amin'ny fifamadihana fomba fiakanjo sy ny ‘transsexualisme' ( tsy fanekena ny taovam-pananahan'ny tena)
Pocahontas: Jereo inona no itafiany. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
ireo (nitranga in-13) : Nolazain'ireo manam-pahefana izay nandrara fa mety hampikorontana ny ankizy izany rehefa mamaky ny Allah izy ireo. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
MH370 (nitranga in-3) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
nahatontosa (nitranga in-1) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
iree (nitranga in-1) : Fa nahoana no mitranga amintsika iree zava-dratsy rehetra ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
midika (nitranga in-1) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
vitsivitsy (nitranga in-4) : Ireto misy tora-po vitsivitsy avy amin'ireo tranonkalam-baovao “Malaysiakini”:
Relevancy: Maninona no nosivanina ilay boky rehefa azo atao ihany ny mangataka ny fanovana ny teny. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fotsiny (nitranga in-1) : Tsipihin'izay ireo fa tokony ho nangataka tamin'ny mpamoaka ilay tantara fotsiny ny mpitondra mba hanova ilay dikanteny. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
dikanteny (nitranga in-1) : Tsipihin'izay ireo fa tokony ho nangataka tamin'ny mpamoaka ilay tantara fotsiny ny mpitondra mba hanova ilay dikanteny. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mangataka (nitranga in-1) : Ireto misy tora-po vitsivitsy avy amin'ireo tranonkalam-baovao “Malaysiakini”:
hanihany (nitranga in-1) : — Daryl Tan (@ExDaro) March 7, 2014
ratsy (nitranga in-1) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
manga (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mpirenireny (nitranga in-1) : Navitrika tamin'ny fisoloambava ho fiarovana ny tontolo masin'ny vorona ankoatra ny fanentanana fanairana momba ny fiainan'ny vorona mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa ny “Birders” (mpankafy vorona). (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mafy (nitranga in-1) : Matahotra ny (na angamba tsy afaka) hiasa mafy sy hieritreritra amim-pahakingan-tsaina mba hanome malaky/ hanitsy resaka/ olana. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
fetibe (nitranga in-1) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
aoriana (nitranga in-1) : — Daryl Tan (@ExDaro) March 7, 2014
Mindanao (nitranga in-4) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fampiasana (nitranga in-1) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
fandraràna (nitranga in-3) : Tsy mankasitraka ilay fandraràna ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
hanitsianareo (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
March (nitranga in-4) : — Daryl Tan (@ExDaro) March 7, 2014
fahadisoana (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
Japoney (nitranga in-1) : Maherifo ao aminà tantara an-tsary malaza Japoney i Ultraman. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
andalovan' (nitranga in-1) : Fanampin'izany, mety ahitana vorona mpifindramonina ihany koa amin'ireo vondro-nosy izay andalovan'ny lalam-pisidinana mampitohy an'i Azia sy Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mahare (nitranga in-1) : Any amin'ny firenena maro, zavatra iainana andavanandro mahazatra ny mahare fanambarana politika ataon'ny mpiantsehatra mitsikera ny filoha eo amin'ny fahefana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
2014 (nitranga in-5) : — Daryl Tan (@ExDaro) March 7, 2014
Tratra aoriana ny fandraràna ny #ultraman, noheveriko fa hanihany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Navitrika (nitranga in-1) : Navitrika tamin'ny fisoloambava ho fiarovana ny tontolo masin'ny vorona ankoatra ny fanentanana fanairana momba ny fiainan'ny vorona mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa ny “Birders” (mpankafy vorona). (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
filalaovany (nitranga in-1) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
good (nitranga in-2) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nangataka (nitranga in-1) : Tsipihin'izay ireo fa tokony ho nangataka tamin'ny mpamoaka ilay tantara fotsiny ny mpitondra mba hanova ilay dikanteny. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
nanasongadinana (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
spell (nitranga in-1) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
hizahana (nitranga in-1) : Tena mahafinaritra tokoa ny Valan-Javaboary Pasonanca raha hizahana voromanidina. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Lohahevitra (nitranga in-1) : Lohahevitra lehibe ho amin'ny fanadihadiana lalina kokoa ny fahitana ankanim-boropotsy lehibe eto. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
they (nitranga in-2) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mahasahy (nitranga in-1) : Any Rosia, tena ankavitsiana dia ankavitsiana izany olona mipoitra matetika amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika izany ka hitsikera, na mahasahy irery hiampanga an'i Vladimir Putin. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
nahapika (nitranga in-1) : Izany hoe, nahapika “zavamananaina” telo aho nandritra ny ora efatra nizahako vorona tao Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Medvedev (nitranga in-1) : (Jereo ny pehin'ny praiminisitra Dmitri Medvedev ho ohatra mazava amin'izany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
nisy (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
azon' (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
fanohanany (nitranga in-1) : Raha handray ohatra, mihoatra ny 500 ny olona fanta-daza ara-kolontsaina vao nanasonia taratasim-bahoaka milaza ny fanohanany ny ataon'i Putin momba an'i “Ukraine sy Krimea. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mahery (nitranga in-2) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fanambaran' (nitranga in-1) : Indrindra moa fa nametraka ny fanambaran'i Khabensky eo amin'ny tantara be mpamaky indrindra ny vavahadim-baovao NewsRu. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mazava (nitranga in-1) : (Jereo ny pehin'ny praiminisitra Dmitri Medvedev ho ohatra mazava amin'izany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
heroines (nitranga in-1) : Ary koa ny heroines dia litera 2 tsy itovizany amin'ny heroin, zava-mahadomelina voarara any Malezia. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
shortage (nitranga in-1) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
fitoviany (nitranga in-1) : com/34cu9dhjxE
didy (nitranga in-2) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
fanohanana (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mpitendry (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
ankamaroan' (nitranga in-1) : Tsy mankasitraka ilay fandraràna ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mety (nitranga in-3) : Nolazain'ireo manam-pahefana izay nandrara fa mety hampikorontana ny ankizy izany rehefa mamaky ny Allah izy ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
ihany (nitranga in-12) : Ireto misy tora-po vitsivitsy avy amin'ireo tranonkalam-baovao “Malaysiakini”:
Relevancy: Maninona no nosivanina ilay boky rehefa azo atao ihany ny mangataka ny fanovana ny teny. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Jereo (nitranga in-1) : Mulan: Mamporisika amin'ny fifamadihana fomba fiakanjo sy ny ‘transsexualisme' ( tsy fanekena ny taovam-pananahan'ny tena)
Nanoratra (nitranga in-1) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
Pasifika (nitranga in-2) : Fanampin'izany, mety ahitana vorona mpifindramonina ihany koa amin'ireo vondro-nosy izay andalovan'ny lalam-pisidinana mampitohy an'i Azia sy Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
profesora (nitranga in-1) : Mandritra izany fotoana izany ny mpampianatra amin'ny oniversite, ny profesora Arnold Alamon namoaka sarin'ny vorona ao Gitagum, ao amin'ny nosy Mindanao ihany koa. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mpijery (nitranga in-1) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
nefa (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Everett (nitranga in-1) : Afa-nandre ny hiakam-borondolo-voromahery Mindanao sy vorondolo kelikely Everett aho raha nanao fitsangatsanganana nizaha vorondolo tao amin'ny faritra ihany andro vitsivitsy talohan'izao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
irariana (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
ankavitsiana (nitranga in-2) : Any Rosia, tena ankavitsiana dia ankavitsiana izany olona mipoitra matetika amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika izany ka hitsikera, na mahasahy irery hiampanga an'i Vladimir Putin. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Tailor (nitranga in-1) : Nanana anjara bitika ihany koa izy tany amin'ny sarimihetsika tandrefana tahaka ny “Tinker Tailor Solider Spy” sy “Wanted”. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
voalohany (nitranga in-1) : Tokony horaràna ihany koa ny vaninteny 2 voalohany amin'ny Aladdin. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
olona (nitranga in-5) : — Ariff Iman Anuwi (@AriffImn) March 7, 2014
Fa nahoana ny olona no dondrona e. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Nanampy (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mpanao (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
malagasy (nitranga in-2) : Saripikan'i Arnold Alamon
Ukraine (nitranga in-2) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
famantaran' (nitranga in-1) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
takalon' (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
manerana (nitranga in-1) : Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
reason (nitranga in-1) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
heroin (nitranga in-1) : Ary koa ny heroines dia litera 2 tsy itovizany amin'ny heroin, zava-mahadomelina voarara any Malezia. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
besides (nitranga in-1) : And besides, I've dipped on the White-eared Tailorbird there twice. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
voajanahary (nitranga in-1) : Saingy mampalahelo, ahiana ho potiky ny tetikasam-pampandrosoana mihetaketaka sy ny fahapotehan'ny tontolo voajanahary ny fonenam-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
birding (nitranga in-2) : So, I got three lifers in four hours birding in Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mandrara (nitranga in-1) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
StumbleUpon (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
antsoina (nitranga in-1) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
tanàna (nitranga in-2) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
days (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
lazan' (nitranga in-1) : Ny lazan'i Khabensky sy ny teny mahitsy nampiasaina hanamelohany an'i Kremlin, anefa, no mametraka ny fanambarana nataony ho zavatra manokana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tokony (nitranga in-1) : Tsipihin'izay ireo fa tokony ho nangataka tamin'ny mpamoaka ilay tantara fotsiny ny mpitondra mba hanova ilay dikanteny. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Olaimpika (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
place (nitranga in-2) : The Pasonanca Natural Park is such a wonderful place to go birding in. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fitsipika (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny ny fomba tsotra indrindra hatrany dia ny mamono/mandrara/manova na mamorona lalàna sy fitsipika vaovao. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Ariff (nitranga in-1) : — Ariff Iman Anuwi (@AriffImn) March 7, 2014
Timur (nitranga in-1) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
akanjo (nitranga in-2) : com/34cu9dhjxE
fotoanan' (nitranga in-1) : Ny marina, mora mirona kokoa amin'ny fideraderana ny ny filoha ny olona malaza tahaka an'i Khabensky rehefa amin'ny fotoanan'ny krizy iraisampirenena. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
misy (nitranga in-3) : Ireto misy tora-po vitsivitsy avy amin'ireo tranonkalam-baovao “Malaysiakini”:
such (nitranga in-1) : The Pasonanca Natural Park is such a wonderful place to go birding in. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
notontosay (nitranga in-1) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Flickr (nitranga in-1) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
Sochy (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mbola (nitranga in-1) : (Amin'izao fotoana anoratana izao dia mbola mitana ny sangany hatrany ilay lahatsoratra. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
pejy (nitranga in-5) : Indreto ny sasantsasany amin'ny sarim-borona ao amin'ny pejy Facebook an'i Arnold:
Soimanga volon'oliva. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
ambanivohitra (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
ankavanana (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
wonderful (nitranga in-1) : The Pasonanca Natural Park is such a wonderful place to go birding in. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Mamporisika (nitranga in-2) : Jasmine: Mamporisika amin'ny fifandraisana amin'ny mpangalatra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
nakan' (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
hahafantaran' (nitranga in-1) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Zavona (nitranga in-1) : — Kevin Tan (@kevingptan) March 9, 2014
Zavona, dengue (tazo mahery), tsy fahampian-drano, haintany, amin'izao fotoana izao MH370. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
lazaina (nitranga in-1) : )
Vahaolana (nitranga in-1) : Not Smart: Vahaolana tsotsotra foana no ataon'ny mpitondra anay. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
don' (nitranga in-1) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
taorian' (nitranga in-1) : Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mpandika (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
ankapobeny (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny ny fomba tsotra indrindra hatrany dia ny mamono/mandrara/manova na mamorona lalàna sy fitsipika vaovao. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
ohatra (nitranga in-2) : Raha handray ohatra, mihoatra ny 500 ny olona fanta-daza ara-kolontsaina vao nanasonia taratasim-bahoaka milaza ny fanohanany ny ataon'i Putin momba an'i “Ukraine sy Krimea. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
bebe (nitranga in-1) : Mbola hiverina tanteraka any izahay ary handany fotoana betsaka kokoa hijery zavatra bebe kokoa any an'ala. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Voasivan' (nitranga in-1) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
Hawk (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fanentanana (nitranga in-1) : Navitrika tamin'ny fisoloambava ho fiarovana ny tontolo masin'ny vorona ankoatra ny fanentanana fanairana momba ny fiainan'ny vorona mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa ny “Birders” (mpankafy vorona). (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Allah (nitranga in-3) : Nadika hoe Allah ny teny hoe Andriamanitra ao amin'io tantara io. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mpanohitra (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
herintaona (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
video (nitranga in-1) : Saripikan'i Angela Colmenares-Sabino
Angela (nitranga in-2) : Saripikan'i Angela Colmenares-Sabino
Tamy (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Kremlin (nitranga in-1) : Ny lazan'i Khabensky sy ny teny mahitsy nampiasaina hanamelohany an'i Kremlin, anefa, no mametraka ny fanambarana nataony ho zavatra manokana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mahafinaritra (nitranga in-1) : Tena mahafinaritra tokoa ny Valan-Javaboary Pasonanca raha hizahana voromanidina. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
ankoatra (nitranga in-1) : Navitrika tamin'ny fisoloambava ho fiarovana ny tontolo masin'ny vorona ankoatra ny fanentanana fanairana momba ny fiainan'ny vorona mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa ny “Birders” (mpankafy vorona). (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
ofisialy (nitranga in-3) : ” Nivoaka tao amin'ny haba-tranonkala ofisialin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ny taratasy ary miaraka amin'ny lisitr'ireo nanasonia. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tandrefana (nitranga in-1) : Nanana anjara bitika ihany koa izy tany amin'ny sarimihetsika tandrefana tahaka ny “Tinker Tailor Solider Spy” sy “Wanted”. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
able (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
manjavasoka (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
Vintsy manjavasoka. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
also (nitranga in-2) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
fisoloambava (nitranga in-1) : Navitrika tamin'ny fisoloambava ho fiarovana ny tontolo masin'ny vorona ankoatra ny fanentanana fanairana momba ny fiainan'ny vorona mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa ny “Birders” (mpankafy vorona). (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nahazo (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mpamaky (nitranga in-2) : Indrindra moa fa nametraka ny fanambaran'i Khabensky eo amin'ny tantara be mpamaky indrindra ny vavahadim-baovao NewsRu. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hajaina (nitranga in-1) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
hitsikera (nitranga in-1) : Any Rosia, tena ankavitsiana dia ankavitsiana izany olona mipoitra matetika amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika izany ka hitsikera, na mahasahy irery hiampanga an'i Vladimir Putin. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Mandritra (nitranga in-2) : Mandritra izany fotoana izany no anesoan'i L. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fandraran' (nitranga in-1) : com/34cu9dhjxE
hitany (nitranga in-1) : Saripikan'i Angela Colmenares-Sabino
anaran' (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
lalao (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fahefana (nitranga in-1) : Any amin'ny firenena maro, zavatra iainana andavanandro mahazatra ny mahare fanambarana politika ataon'ny mpiantsehatra mitsikera ny filoha eo amin'ny fahefana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
definitely (nitranga in-1) : We will definitely be back and spend more time discovering more of the forest. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
handany (nitranga in-1) : Mbola hiverina tanteraka any izahay ary handany fotoana betsaka kokoa hijery zavatra bebe kokoa any an'ala. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
voarara (nitranga in-1) : Ary koa ny heroines dia litera 2 tsy itovizany amin'ny heroin, zava-mahadomelina voarara any Malezia. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
handray (nitranga in-1) : Raha handray ohatra, mihoatra ny 500 ny olona fanta-daza ara-kolontsaina vao nanasonia taratasim-bahoaka milaza ny fanohanany ny ataon'i Putin momba an'i “Ukraine sy Krimea. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
foana (nitranga in-1) : Not Smart: Vahaolana tsotsotra foana no ataon'ny mpitondra anay. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Nolazay (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manam-pahefana izay nandrara fa mety hampikorontana ny ankizy izany rehefa mamaky ny Allah izy ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
faritra (nitranga in-2) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
noheveriko (nitranga in-1) : — Daryl Tan (@ExDaro) March 7, 2014
izao (nitranga in-3) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mankany (nitranga in-1) : Saingy hitako [azoko manontolo] ilay voromanidina tamin'ny fotoana hitsoriahany mankany amin'ny tsy hita maso. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
efatra (nitranga in-1) : Izany hoe, nahapika “zavamananaina” telo aho nandritra ny ora efatra nizahako vorona tao Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
hijery (nitranga in-1) : Mbola hiverina tanteraka any izahay ary handany fotoana betsaka kokoa hijery zavatra bebe kokoa any an'ala. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Smog (nitranga in-1) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
izay (nitranga in-10) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hitsoriahany (nitranga in-1) : Saingy hitako [azoko manontolo] ilay voromanidina tamin'ny fotoana hitsoriahany mankany amin'ny tsy hita maso. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Minisiteran' (nitranga in-1) : ” Nivoaka tao amin'ny haba-tranonkala ofisialin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ny taratasy ary miaraka amin'ny lisitr'ireo nanasonia. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
vorondolo (nitranga in-2) : Afa-nandre ny hiakam-borondolo-voromahery Mindanao sy vorondolo kelikely Everett aho raha nanao fitsangatsanganana nizaha vorondolo tao amin'ny faritra ihany andro vitsivitsy talohan'izao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
ahafahana (nitranga in-2) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fanambarana (nitranga in-3) : Any amin'ny firenena maro, zavatra iainana andavanandro mahazatra ny mahare fanambarana politika ataon'ny mpiantsehatra mitsikera ny filoha eo amin'ny fahefana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
raràna (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
fanamarinana (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Ministeran' (nitranga in-1) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
olana (nitranga in-1) : Matahotra ny (na angamba tsy afaka) hiasa mafy sy hieritreritra amim-pahakingan-tsaina mba hanome malaky/ hanitsy resaka/ olana. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Ultraman (nitranga in-3) : Maherifo ao aminà tantara an-tsary malaza Japoney i Ultraman. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
only (nitranga in-1) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
araka (nitranga in-1) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
andavanandro (nitranga in-1) : Any amin'ny firenena maro, zavatra iainana andavanandro mahazatra ny mahare fanambarana politika ataon'ny mpiantsehatra mitsikera ny filoha eo amin'ny fahefana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Indrindra (nitranga in-1) : Indrindra moa fa nametraka ny fanambaran'i Khabensky eo amin'ny tantara be mpamaky indrindra ny vavahadim-baovao NewsRu. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
ngonongonon' (nitranga in-1) : Izany no fanambarana nataon'olomangan'ny kolontsaina — fa tsy ngonongonon'ireo avy amin'ny zanakolontsaina Rosiana sasany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fifanoherana (nitranga in-1) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mampididoza (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
sidintsidy (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
itafiany (nitranga in-1) : Mulan: Mamporisika amin'ny fifamadihana fomba fiakanjo sy ny ‘transsexualisme' ( tsy fanekena ny taovam-pananahan'ny tena)
Andriamanitra (nitranga in-1) : Nadika hoe Allah ny teny hoe Andriamanitra ao amin'io tantara io. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
izahay (nitranga in-2) : Manana olon-doza mifehy ny governemanta izahay. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Anuwy (nitranga in-1) : — Ariff Iman Anuwi (@AriffImn) March 7, 2014
Ireto (nitranga in-1) : Ireto misy tora-po vitsivitsy avy amin'ireo tranonkalam-baovao “Malaysiakini”:
mankasitraka (nitranga in-1) : Tsy mankasitraka ilay fandraràna ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
fahapotehan' (nitranga in-1) : Saingy mampalahelo, ahiana ho potiky ny tetikasam-pampandrosoana mihetaketaka sy ny fahapotehan'ny tontolo voajanahary ny fonenam-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
tights (nitranga in-2) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
fanamarihana (nitranga in-1) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
nandrara (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manam-pahefana izay nandrara fa mety hampikorontana ny ankizy izany rehefa mamaky ny Allah izy ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
twice (nitranga in-1) : And besides, I've dipped on the White-eared Tailorbird there twice. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
VALID (nitranga in-1) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
fiakanjo (nitranga in-1) : Mulan: Mamporisika amin'ny fifamadihana fomba fiakanjo sy ny ‘transsexualisme' ( tsy fanekena ny taovam-pananahan'ny tena)
Jentilisa (nitranga in-2) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Jentilisa
endrika (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
vorona (nitranga in-9) : Fanampin'izany, mety ahitana vorona mpifindramonina ihany koa amin'ireo vondro-nosy izay andalovan'ny lalam-pisidinana mampitohy an'i Azia sy Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
inona (nitranga in-1) : Mulan: Mamporisika amin'ny fifamadihana fomba fiakanjo sy ny ‘transsexualisme' ( tsy fanekena ny taovam-pananahan'ny tena)
voamarina (nitranga in-1) : )
Aladdin (nitranga in-1) : Tokony horaràna ihany koa ny vaninteny 2 voalohany amin'ny Aladdin. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
nizara (nitranga in-1) : Saripikan'i Angela Colmenares-Sabino
nadika (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
fankahalana (nitranga in-1) : Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mihetaketaka (nitranga in-1) : Saingy mampalahelo, ahiana ho potiky ny tetikasam-pampandrosoana mihetaketaka sy ny fahapotehan'ny tontolo voajanahary ny fonenam-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
subject (nitranga in-1) : The occurrence of breeding Great Egrets there is a great subject for further study. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
tena (nitranga in-2) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Park (nitranga in-1) : The Pasonanca Natural Park is such a wonderful place to go birding in. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nanehoany (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Marsa (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
anoratana (nitranga in-1) : (Amin'izao fotoana anoratana izao dia mbola mitana ny sangany hatrany ilay lahatsoratra. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
teny (nitranga in-9) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
Voasivan'ny Ministeran'ny atitany ny trano famoaham-boky Bahasa namoaka ny boky mirakitra ny tantara an-tsary ‘Ultraman' noho ny nampiasany ny teny hoe ‘Allah'. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
nampiasany (nitranga in-1) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
nifanena (nitranga in-1) : Ankilan'izany, indroa nifanena (nifanondraka) tamin'ny vorona fotsisofina aho tany. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Egrets (nitranga in-1) : The occurrence of breeding Great Egrets there is a great subject for further study. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
hisy (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
dokambarotra (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
reddit (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
Natural (nitranga in-1) : The Pasonanca Natural Park is such a wonderful place to go birding in. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
malaza (nitranga in-4) : Maherifo ao aminà tantara an-tsary malaza Japoney i Ultraman. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
namoaka (nitranga in-3) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
Zokiny (nitranga in-1) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
tantara (nitranga in-7) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
wear (nitranga in-1) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Satria (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
taratasy (nitranga in-1) : ” Nivoaka tao amin'ny haba-tranonkala ofisialin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ny taratasy ary miaraka amin'ny lisitr'ireo nanasonia. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
manohitra (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Dmitry (nitranga in-1) : (Jereo ny pehin'ny praiminisitra Dmitri Medvedev ho ohatra mazava amin'izany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mailaka (nitranga in-1) : Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
water (nitranga in-1) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
Raha (nitranga in-2) : Raha handray ohatra, mihoatra ny 500 ny olona fanta-daza ara-kolontsaina vao nanasonia taratasim-bahoaka milaza ny fanohanany ny ataon'i Putin momba an'i “Ukraine sy Krimea. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
zanakolontsaina (nitranga in-1) : Izany no fanambarana nataon'olomangan'ny kolontsaina — fa tsy ngonongonon'ireo avy amin'ny zanakolontsaina Rosiana sasany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hanamelohany (nitranga in-1) : Ny lazan'i Khabensky sy ny teny mahitsy nampiasaina hanamelohany an'i Kremlin, anefa, no mametraka ny fanambarana nataony ho zavatra manokana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fanomezana (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
joke (nitranga in-1) : The #ultraman ban in Malaysia is so retarded I thought it was a joke. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
dobo (nitranga in-1) : Saripikan'i Angela Colmenares-Sabino
Mety (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Bekmambetov (nitranga in-1) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Nanaraka (nitranga in-1) : Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hita (nitranga in-1) : Saingy hitako [azoko manontolo] ilay voromanidina tamin'ny fotoana hitsoriahany mankany amin'ny tsy hita maso. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Malaysia (nitranga in-1) : The #ultraman ban in Malaysia is so retarded I thought it was a joke. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
retarded (nitranga in-1) : The #ultraman ban in Malaysia is so retarded I thought it was a joke. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
ataon' (nitranga in-3) : Not Smart: Vahaolana tsotsotra foana no ataon'ny mpitondra anay. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tanteraka (nitranga in-1) : Mbola hiverina tanteraka any izahay ary handany fotoana betsaka kokoa hijery zavatra bebe kokoa any an'ala. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
whole (nitranga in-1) : But I did get a good look at the whole bird as it glided out of sight. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
maitso (nitranga in-1) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Superman (nitranga in-2) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
fifamadihana (nitranga in-1) : Mulan: Mamporisika amin'ny fifamadihana fomba fiakanjo sy ny ‘transsexualisme' ( tsy fanekena ny taovam-pananahan'ny tena)
hiasa (nitranga in-1) : Matahotra ny (na angamba tsy afaka) hiasa mafy sy hieritreritra amim-pahakingan-tsaina mba hanome malaky/ hanitsy resaka/ olana. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Phillipines (nitranga in-1) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fahita (nitranga in-1) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
nivoaka (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Rothrock (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
nataon' (nitranga in-1) : Izany no fanambarana nataon'olomangan'ny kolontsaina — fa tsy ngonongonon'ireo avy amin'ny zanakolontsaina Rosiana sasany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Khabensky (nitranga in-10) : mpiantsehatra Rosiana Konstantin Khabensky. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
taona (nitranga in-1) : Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
anjatony (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
silamo (nitranga in-1) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mpifindramonina (nitranga in-2) : Fanampin'izany, mety ahitana vorona mpifindramonina ihany koa amin'ireo vondro-nosy izay andalovan'ny lalam-pisidinana mampitohy an'i Azia sy Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Azia (nitranga in-1) : Fanampin'izany, mety ahitana vorona mpifindramonina ihany koa amin'ireo vondro-nosy izay andalovan'ny lalam-pisidinana mampitohy an'i Azia sy Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
lifer (nitranga in-1) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
nizaha (nitranga in-1) : Afa-nandre ny hiakam-borondolo-voromahery Mindanao sy vorondolo kelikely Everett aho raha nanao fitsangatsanganana nizaha vorondolo tao amin'ny faritra ihany andro vitsivitsy talohan'izao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
maro (nitranga in-2) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
three (nitranga in-1) : So, I got three lifers in four hours birding in Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
hieritreritra (nitranga in-2) : Matahotra ny (na angamba tsy afaka) hiasa mafy sy hieritreritra amim-pahakingan-tsaina mba hanome malaky/ hanitsy resaka/ olana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hiverina (nitranga in-1) : Mbola hiverina tanteraka any izahay ary handany fotoana betsaka kokoa hijery zavatra bebe kokoa any an'ala. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
sary (nitranga in-3) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
Voasivan'ny Ministeran'ny atitany ny trano famoaham-boky Bahasa namoaka ny boky mirakitra ny tantara an-tsary ‘Ultraman' noho ny nampiasany ny teny hoe ‘Allah'. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
hiampanga (nitranga in-1) : Any Rosia, tena ankavitsiana dia ankavitsiana izany olona mipoitra matetika amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika izany ka hitsikera, na mahasahy irery hiampanga an'i Vladimir Putin. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
heverina (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
liberaly (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hanitsy (nitranga in-1) : Matahotra ny (na angamba tsy afaka) hiasa mafy sy hieritreritra amim-pahakingan-tsaina mba hanome malaky/ hanitsy resaka/ olana. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
fideraderana (nitranga in-1) : Ny marina, mora mirona kokoa amin'ny fideraderana ny ny filoha ny olona malaza tahaka an'i Khabensky rehefa amin'ny fotoanan'ny krizy iraisampirenena. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
sasantsasany (nitranga in-2) : Indreto ny sasantsasany amin'ny sarim-borona ao amin'ny pejy Facebook an'i Arnold:
tsotsotra (nitranga in-1) : Not Smart: Vahaolana tsotsotra foana no ataon'ny mpitondra anay. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
hanova (nitranga in-1) : Tsipihin'izay ireo fa tokony ho nangataka tamin'ny mpamoaka ilay tantara fotsiny ny mpitondra mba hanova ilay dikanteny. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
anjara (nitranga in-1) : Nanana anjara bitika ihany koa izy tany amin'ny sarimihetsika tandrefana tahaka ny “Tinker Tailor Solider Spy” sy “Wanted”. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Bahasa (nitranga in-1) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
glided (nitranga in-1) : But I did get a good look at the whole bird as it glided out of sight. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nataony (nitranga in-2) : Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
firy (nitranga in-1) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
Nanana (nitranga in-1) : Nanana anjara bitika ihany koa izy tany amin'ny sarimihetsika tandrefana tahaka ny “Tinker Tailor Solider Spy” sy “Wanted”. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tian' (nitranga in-1) : )
nanaovany (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
look (nitranga in-2) : The only VALID reason for KDN to ban Ultraman; they wear tights & they don't look as good as Superman in tights pic. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Everett' (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
googleplus (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
fanairana (nitranga in-1) : Navitrika tamin'ny fisoloambava ho fiarovana ny tontolo masin'ny vorona ankoatra ny fanentanana fanairana momba ny fiainan'ny vorona mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa ny “Birders” (mpankafy vorona). (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nanao (nitranga in-1) : Afa-nandre ny hiakam-borondolo-voromahery Mindanao sy vorondolo kelikely Everett aho raha nanao fitsangatsanganana nizaha vorondolo tao amin'ny faritra ihany andro vitsivitsy talohan'izao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
will (nitranga in-1) : We will definitely be back and spend more time discovering more of the forest. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
while (nitranga in-1) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
Misy (nitranga in-2) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
antony (nitranga in-1) : )
Zamboanga (nitranga in-4) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Rosiana (nitranga in-3) : mpiantsehatra Rosiana Konstantin Khabensky. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
indrindra (nitranga in-5) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tambajotra (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
filoha (nitranga in-2) : Any amin'ny firenena maro, zavatra iainana andavanandro mahazatra ny mahare fanambarana politika ataon'ny mpiantsehatra mitsikera ny filoha eo amin'ny fahefana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Milaza (nitranga in-1) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Famoahana (nitranga in-1) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
aminà (nitranga in-1) : Maherifo ao aminà tantara an-tsary malaza Japoney i Ultraman. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Anuar (nitranga in-1) : com/34cu9dhjxE
nanasonia (nitranga in-2) : Raha handray ohatra, mihoatra ny 500 ny olona fanta-daza ara-kolontsaina vao nanasonia taratasim-bahoaka milaza ny fanohanany ny ataon'i Putin momba an'i “Ukraine sy Krimea. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
miorina (nitranga in-1) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
miaraka (nitranga in-1) : ” Nivoaka tao amin'ny haba-tranonkala ofisialin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ny taratasy ary miaraka amin'ny lisitr'ireo nanasonia. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mametraka (nitranga in-1) : Ny lazan'i Khabensky sy ny teny mahitsy nampiasaina hanamelohany an'i Kremlin, anefa, no mametraka ny fanambarana nataony ho zavatra manokana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hatrany (nitranga in-2) : Amin'ny ankapobeny ny fomba tsotra indrindra hatrany dia ny mamono/mandrara/manova na mamorona lalàna sy fitsipika vaovao. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
lasa (nitranga in-2) : Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
ankizy (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manam-pahefana izay nandrara fa mety hampikorontana ny ankizy izany rehefa mamaky ny Allah izy ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
rehefa (nitranga in-3) : Nolazain'ireo manam-pahefana izay nandrara fa mety hampikorontana ny ankizy izany rehefa mamaky ny Allah izy ireo. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
delicious (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
nisehoany (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
zavatra (nitranga in-4) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
Satria aho mpanohana ny fiarovana ny maoralim-bahoaka, dia te-hanolotra soso-kevitra fanampiny ho azy ireo aho momba ireo zavatra hafa ankamamian'ny fahazazana azon'izy ireo raràna mba hanamarinana ny isany sy ny karamany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Tratra (nitranga in-1) : — Daryl Tan (@ExDaro) March 7, 2014
hafatra (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fanalan' (nitranga in-1) : Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
lehibe (nitranga in-2) : Lohahevitra lehibe ho amin'ny fanadihadiana lalina kokoa ny fahitana ankanim-boropotsy lehibe eto. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
hany (nitranga in-1) : com/34cu9dhjxE
hamelomana (nitranga in-1) : Tokony hamelomana kiririokam-panairana izany: hosoka angamba io pejy io. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy  Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
haunting (nitranga in-1) : Why all these negativity haunting us. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mpiantsehatra (nitranga in-5) : mpiantsehatra Rosiana Konstantin Khabensky. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tahaka (nitranga in-3) : Nanana anjara bitika ihany koa izy tany amin'ny sarimihetsika tandrefana tahaka ny “Tinker Tailor Solider Spy” sy “Wanted”. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
antserasera (nitranga in-1) : Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fitsipiky (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tratrany (nitranga in-1) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fetiben' (nitranga in-2) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Aida (nitranga in-1) : com/34cu9dhjxE
thought (nitranga in-1) : The #ultraman ban in Malaysia is so retarded I thought it was a joke. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
iampangany (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
spend (nitranga in-1) : We will definitely be back and spend more time discovering more of the forest. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
kokoa (nitranga in-4) : Mbola hiverina tanteraka any izahay ary handany fotoana betsaka kokoa hijery zavatra bebe kokoa any an'ala. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mialoha (nitranga in-1) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
vakio (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
owling (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Scops (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mpangalatra (nitranga in-1) : Jasmine: Mamporisika amin'ny fifandraisana amin'ny mpangalatra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mpanomana (nitranga in-1) : Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
dipped (nitranga in-1) : And besides, I've dipped on the White-eared Tailorbird there twice. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
kolontsaina (nitranga in-1) : Izany no fanambarana nataon'olomangan'ny kolontsaina — fa tsy ngonongonon'ireo avy amin'ny zanakolontsaina Rosiana sasany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
tononina (nitranga in-1) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
YouTube (nitranga in-1) : pikantsary YouTube. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
milaza (nitranga in-1) : Raha handray ohatra, mihoatra ny 500 ny olona fanta-daza ara-kolontsaina vao nanasonia taratasim-bahoaka milaza ny fanohanany ny ataon'i Putin momba an'i “Ukraine sy Krimea. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
habaka (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
litera (nitranga in-1) : Ary koa ny heroines dia litera 2 tsy itovizany amin'ny heroin, zava-mahadomelina voarara any Malezia. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
easy (nitranga in-1) : The place and bird life is amazing (and the trails are easy. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Konstantin (nitranga in-2) : mpiantsehatra Rosiana Konstantin Khabensky. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
kely (nitranga in-1) : Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Mong (nitranga in-2) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
anefa (nitranga in-1) : Ny lazan'i Khabensky sy ny teny mahitsy nampiasaina hanamelohany an'i Kremlin, anefa, no mametraka ny fanambarana nataony ho zavatra manokana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
kaonty (nitranga in-2) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
vonjeo (nitranga in-1) : Mbà vonjeo re i Malezia. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Tokony (nitranga in-2) : Tokony horaràna ihany koa ny vaninteny 2 voalohany amin'ny Aladdin. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Tsikirovana (nitranga in-1) : Photo by Arnold Alamon
MegaFon (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
NewsRu (nitranga in-1) : Indrindra moa fa nametraka ny fanambaran'i Khabensky eo amin'ny tantara be mpamaky indrindra ny vavahadim-baovao NewsRu. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
pikantsary (nitranga in-1) : pikantsary YouTube. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
nizahako (nitranga in-1) : Izany hoe, nahapika “zavamananaina” telo aho nandritra ny ora efatra nizahako vorona tao Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
izany (nitranga in-10) : Nolazain'ireo manam-pahefana izay nandrara fa mety hampikorontana ny ankizy izany rehefa mamaky ny Allah izy ireo. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Vkontakte (nitranga in-4) : )
nilalao (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
nosy (nitranga in-3) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
izaoresabe (nitranga in-1) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
talohan' (nitranga in-1) : Afa-nandre ny hiakam-borondolo-voromahery Mindanao sy vorondolo kelikely Everett aho raha nanao fitsangatsanganana nizaha vorondolo tao amin'ny faritra ihany andro vitsivitsy talohan'izao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
volondavenona (nitranga in-1) : volondavenona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fiaramanidina (nitranga in-1) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
Malezia (nitranga in-4) : Firenena betsaka Silamo i Malezia. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
dengue (nitranga in-2) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
manokana (nitranga in-2) : Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fotoana (nitranga in-8) : Mandritra izany fotoana izany no anesoan'i L. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mpamoaka (nitranga in-1) : Tsipihin'izay ireo fa tokony ho nangataka tamin'ny mpamoaka ilay tantara fotsiny ny mpitondra mba hanova ilay dikanteny. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Fanampy (nitranga in-1) : Fanampin'izany, mety ahitana vorona mpifindramonina ihany koa amin'ireo vondro-nosy izay andalovan'ny lalam-pisidinana mampitohy an'i Azia sy Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
twitter (nitranga in-4) : twitter. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hitako (nitranga in-1) : Saingy hitako [azoko manontolo] ilay voromanidina tamin'ny fotoana hitsoriahany mankany amin'ny tsy hita maso. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
back (nitranga in-1) : We will definitely be back and spend more time discovering more of the forest. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
sight (nitranga in-1) : But I did get a good look at the whole bird as it glided out of sight. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
lalàna (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny ny fomba tsotra indrindra hatrany dia ny mamono/mandrara/manova na mamorona lalàna sy fitsipika vaovao. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
iainana (nitranga in-1) : Any amin'ny firenena maro, zavatra iainana andavanandro mahazatra ny mahare fanambarana politika ataon'ny mpiantsehatra mitsikera ny filoha eo amin'ny fahefana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
hiantsoana (nitranga in-1) : Misy fifanoherana ao izaoresabe amin'izao fotana izao momba ny didy mandrara ireo tsy silamo amin'ny fampiasana ny teny hoe Allah hiantsoana an'Andriamanitra. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
manakaiky (nitranga in-1) : Ny tanànan'i Gitagum dia manakaiky an'i Laguindingan, toerana misy ny seranampiaramanidina iraisampirenena. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
matetika (nitranga in-1) : Any Rosia, tena ankavitsiana dia ankavitsiana izany olona mipoitra matetika amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika izany ka hitsikera, na mahasahy irery hiampanga an'i Vladimir Putin. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mpankafy (nitranga in-1) : Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Laguindingan (nitranga in-1) : Ny tanànan'i Gitagum dia manakaiky an'i Laguindingan, toerana misy ny seranampiaramanidina iraisampirenena. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
firenena (nitranga in-3) : Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
lisitr' (nitranga in-1) : ” Nivoaka tao amin'ny haba-tranonkala ofisialin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ny taratasy ary miaraka amin'ny lisitr'ireo nanasonia. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
nanafihan' (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
manampahaizana (nitranga in-1) : Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Tsipihy (nitranga in-1) : Tsipihin'izay ireo fa tokony ho nangataka tamin'ny mpamoaka ilay tantara fotsiny ny mpitondra mba hanova ilay dikanteny. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
sasany (nitranga in-1) : Izany no fanambarana nataon'olomangan'ny kolontsaina — fa tsy ngonongonon'ireo avy amin'ny zanakolontsaina Rosiana sasany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Kolontsaina (nitranga in-1) : ” Nivoaka tao amin'ny haba-tranonkala ofisialin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ny taratasy ary miaraka amin'ny lisitr'ireo nanasonia. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Vintsy (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
anaty (nitranga in-3) : com/34cu9dhjxE
— Aida Anuar (@aidaadibah) March 6, 2014 Ny hany anton'ny fandraran'ny KDN ny Ultraman; Ny fitondrany akanjo manara-bàtana sy ny tsy fitoviany amin'ny Superman akory ao anaty akanjo manara-bàtana. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
manandanja (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
praiminisitra (nitranga in-1) : (Jereo ny pehin'ny praiminisitra Dmitri Medvedev ho ohatra mazava amin'izany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
anesoan' (nitranga in-1) : Mandritra izany fotoana izany no anesoan'i L. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
nametraka (nitranga in-1) : Indrindra moa fa nametraka ny fanambaran'i Khabensky eo amin'ny tantara be mpamaky indrindra ny vavahadim-baovao NewsRu. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
anton' (nitranga in-1) : com/34cu9dhjxE
Herinandro (nitranga in-1) : Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
ahitana (nitranga in-2) : Fanampin'izany, mety ahitana vorona mpifindramonina ihany koa amin'ireo vondro-nosy izay andalovan'ny lalam-pisidinana mampitohy an'i Azia sy Pasifika. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fanovana (nitranga in-1) : Ireto misy tora-po vitsivitsy avy amin'ireo tranonkalam-baovao “Malaysiakini”:
ilay (nitranga in-8) : Tsy mankasitraka ilay fandraràna ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fiarovana (nitranga in-2) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
Satria aho mpanohana ny fiarovana ny maoralim-bahoaka, dia te-hanolotra soso-kevitra fanampiny ho azy ireo aho momba ireo zavatra hafa ankamamian'ny fahazazana azon'izy ireo raràna mba hanamarinana ny isany sy ny karamany. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
fitondrany (nitranga in-1) : com/34cu9dhjxE
lahatsoratra (nitranga in-6) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
governemanta (nitranga in-1) : Manana olon-doza mifehy ny governemanta izahay. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
hanamarinana (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
Saripikan' (nitranga in-6) : Saripikan'i Arnold Alamon. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
noho (nitranga in-2) : sary amin'ny Flickr avy amin'i ted adnan (Lisansa CC )
fomba (nitranga in-3) : Amin'ny ankapobeny ny fomba tsotra indrindra hatrany dia ny mamono/mandrara/manova na mamorona lalàna sy fitsipika vaovao. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
gazety (nitranga in-2) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
lalina (nitranga in-1) : Lohahevitra lehibe ho amin'ny fanadihadiana lalina kokoa ny fahitana ankanim-boropotsy lehibe eto. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Firenena (nitranga in-1) : Firenena betsaka Silamo i Malezia. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
lifers (nitranga in-1) : So, I got three lifers in four hours birding in Pasonanca. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Tailorbird (nitranga in-1) : And besides, I've dipped on the White-eared Tailorbird there twice. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
marika (nitranga in-2) : Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mamorona (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny ny fomba tsotra indrindra hatrany dia ny mamono/mandrara/manova na mamorona lalàna sy fitsipika vaovao. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Mpanoratra (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
irery (nitranga in-1) : Any Rosia, tena ankavitsiana dia ankavitsiana izany olona mipoitra matetika amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika izany ka hitsikera, na mahasahy irery hiampanga an'i Vladimir Putin. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
sarimihetsika (nitranga in-3) : Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
area (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
nofaritana (nitranga in-1) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
there (nitranga in-2) : And besides, I've dipped on the White-eared Tailorbird there twice. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
tamy (nitranga in-8) : Tsipihin'izay ireo fa tokony ho nangataka tamin'ny mpamoaka ilay tantara fotsiny ny mpitondra mba hanova ilay dikanteny. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
breeding (nitranga in-1) : The occurrence of breeding Great Egrets there is a great subject for further study. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
sangany (nitranga in-1) : (Amin'izao fotoana anoratana izao dia mbola mitana ny sangany hatrany ilay lahatsoratra. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fitsangatsanganana (nitranga in-1) : Afa-nandre ny hiakam-borondolo-voromahery Mindanao sy vorondolo kelikely Everett aho raha nanao fitsangatsanganana nizaha vorondolo tao amin'ny faritra ihany andro vitsivitsy talohan'izao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Fanamarihan' (nitranga in-1) : Saripikan'i Arnold Alamon
hampikorontana (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manam-pahefana izay nandrara fa mety hampikorontana ny ankizy izany rehefa mamaky ny Allah izy ireo. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
hear (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
olaimpikan' (nitranga in-1) : Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
raisina (nitranga in-1) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
mahitsy (nitranga in-1) : Ny lazan'i Khabensky sy ny teny mahitsy nampiasaina hanamelohany an'i Kremlin, anefa, no mametraka ny fanambarana nataony ho zavatra manokana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
maso (nitranga in-1) : Saingy hitako [azoko manontolo] ilay voromanidina tamin'ny fotoana hitsoriahany mankany amin'ny tsy hita maso. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
isany (nitranga in-1) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
Gazeta (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Indreto (nitranga in-1) : Indreto ny sasantsasany amin'ny sarim-borona ao amin'ny pejy Facebook an'i Arnold:
mozika (nitranga in-1) : Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
fahitalavitra (nitranga in-1) : Any Rosia, tena ankavitsiana dia ankavitsiana izany olona mipoitra matetika amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika izany ka hitsikera, na mahasahy irery hiampanga an'i Vladimir Putin. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
raha (nitranga in-2) : Afa-nandre ny hiakam-borondolo-voromahery Mindanao sy vorondolo kelikely Everett aho raha nanao fitsangatsanganana nizaha vorondolo tao amin'ny faritra ihany andro vitsivitsy talohan'izao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Mavo (nitranga in-1) : Photo by Arnold Alamon
kelikely (nitranga in-1) : Afa-nandre ny hiakam-borondolo-voromahery Mindanao sy vorondolo kelikely Everett aho raha nanao fitsangatsanganana nizaha vorondolo tao amin'ny faritra ihany andro vitsivitsy talohan'izao. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
life (nitranga in-1) : The place and bird life is amazing (and the trails are easy. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
toetran' (nitranga in-1) : Famoahana an-tsary toetran'olona iray izay nofaritana ho ” raisina sy hajaina ho toy ny ‘Andriamanitra' na ny Zokiny indrindra amin'ireo mahery fo” ny ‘Ultraman The Ultra Power'. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
Palatino (nitranga in-2) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
Alamon (nitranga in-7) : Saripikan'i Arnold Alamon. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
pehy (nitranga in-1) : (Jereo ny pehin'ny praiminisitra Dmitri Medvedev ho ohatra mazava amin'izany. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
trip (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
mifehy (nitranga in-1) : Manana olon-doza mifehy ny governemanta izahay. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
hafa (nitranga in-3) : ny didy hisivanana ireo tantara an-tsary hafa :
Iman (nitranga in-1) : — Ariff Iman Anuwi (@AriffImn) March 7, 2014
when (nitranga in-1) : I was also able to hear the Mindanao Hawk Owl and Everett's Scops Owl when I joined an owling trip a few days earlier in the area too. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Philippines (nitranga in-1) : Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
angamba (nitranga in-2) : Matahotra ny (na angamba tsy afaka) hiasa mafy sy hieritreritra amim-pahakingan-tsaina mba hanome malaky/ hanitsy resaka/ olana. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
indroa (nitranga in-1) : Ankilan'izany, indroa nifanena (nifanondraka) tamin'ny vorona fotsisofina aho tany. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Gitagum (nitranga in-2) : Mandritra izany fotoana izany ny mpampianatra amin'ny oniversite, ny profesora Arnold Alamon namoaka sarin'ny vorona ao Gitagum, ao amin'ny nosy Mindanao ihany koa. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
matanjaka (nitranga in-1) : )
Vladimir (nitranga in-2) : Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
mpioko (nitranga in-1) : Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
hitanao (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
Arnold (nitranga in-7) : Saripikan'i Arnold Alamon. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
tokoa (nitranga in-2) : Tena mahafinaritra tokoa ny Valan-Javaboary Pasonanca raha hizahana voromanidina. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Nandika (nitranga in-3) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
haintany (nitranga in-2) : Mitebiteby ny amin'ireo fifandimbiasan-tantara ratsy any Malezia, toy ny haintany, ny tsy fahitana ny fiaramanidina MH370 ary ny fandraràna ny Ultraman i Kevin Tan :
mpiserasera (nitranga in-1) : Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
lalana (nitranga in-1) : Tena mahavariana tokoa ny toerana sy ny fiainam-borona ao (ary mora ihany koa ny lalana. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
ahiana (nitranga in-1) : Saingy mampalahelo, ahiana ho potiky ny tetikasam-pampandrosoana mihetaketaka sy ny fahapotehan'ny tontolo voajanahary ny fonenam-borona. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Nivoaka (nitranga in-1) : ” Nivoaka tao amin'ny haba-tranonkala ofisialin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ny taratasy ary miaraka amin'ny lisitr'ireo nanasonia. (Niampanga an'i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia?)
time (nitranga in-1) : We will definitely be back and spend more time discovering more of the forest. (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Manana (nitranga in-1) : Manana olon-doza mifehy ny governemanta izahay. (Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’)
delegasionan' (nitranga in-1) : Saripikan'i Angela Colmenares-Sabino
masy (nitranga in-1) : Navitrika tamin'ny fisoloambava ho fiarovana ny tontolo masin'ny vorona ankoatra ny fanentanana fanairana momba ny fiainan'ny vorona mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa ny “Birders” (mpankafy vorona). (SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon'i Philippines)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/18_Martsa_2014&oldid=13915177"
Voaova farany tamin'ny 18 Martsa 2014 amin'ny 21:04 ity pejy ity.